Nandefa Hafatra Mampihorokoditra Ho An’ny Vahoaka Oromo Tamin’ny Alalan’ny Famoretana Nahafatesan’Olona Nandritra Ny Andro Fety Ny Manampahefana Ethiopiana · Global Voices teny Malagasy
Nandefa Hafatra Mampihorokoditra Ho An'ny Vahoaka Oromo Tamin'ny Alalan'ny Famoretana Nahafatesan'Olona Nandritra Ny Andro Fety Ny Manampahefana Ethiopiana
Voadika ny 06 Oktobra 2016 5:32 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsary navoaka tao amin'ny Facebook avy amin'i Jawar Mohammed nandritra ny fifanosehana handositra ny Irreecha , mijery ireo olona mandositra ireo mpitandro ny filaminana amin'izany. Heno ny poa-basy ary niakatra tao anaty fifanosehana ny setroka.
Nitambatra ny setroky ny baomba sy ny bala tena izy avy amin'ny mpitandro ny filaminana tao amin'ny fivoriana lehibe indrindra amin'ny fety Irreecha any amin'ny fanjakana Oromia Ethiopiana izay niteraka fifanosehana hitsoaka nahafatesan'olona tamin'ny Alahady 2 Octobra teo. Olona 52 raha kely indrindra no namoy ny ainy, araka ny filazan'ny fitondram-panjakana, kanefa nilaza ireo vondrona mpikatroka mpanohitra fa tafakatra 600 ny isan'ny olona maty.
Ankoatra izany, olona maromaro izay tsy voafaritra isa no maty tany amin'ny tanàna maro hafa manerana an'i Oromia, fanjakana lehibe indrindra any Ethiopia, araka ny tati-baovao ara-potoana momba ny hetsi-panoherana hoy ny vondrona mpikatroka , ka an-jatony no voasambotra nandritra ny faran'ny herinandro.
Nitranga tsy tapaka isa-potoana tao Oromia ny fihetsiketsehana nanomboka tamin'ny Novambra 2015, mitaky fizakan-tena bebe kokoa, fahalalahana sy fanajana ny foko Oromo, izay efa niaina fanilikilihana mitohy sy fanenjehana nandritra ny 25 taona farany. Tsy vao indray mandeha ireo manampahefana no nampiasa herisetra mahafaty hamelezana ny mpanao fihetsiketsehana .
Inona no niteraka ny firohotana hitsoaka Irreecha ?
Nitranga tao amin'ny farihy Hora, izay heverina ho toerana masina, tao amin'ny tanàna atao hoe Bishoftu, tokony ho 48 kilaometatra atsimo atsinanan'i Addis-Abeba, renivohitr'i Etiopia ny famonoan'olona mahatsiravina ny alahady teo. Olona aman'hetsiny no novinavinaina nivory tany amin'ny faritra samihafa any Ethiopia, tsy hanatontosa ny Irreecha ihany anefa, izay andro tsy fiasana hanamarihana ny fiandohan'ny vanim-potoana fijinjana ao Oromia, fa mba hanaovana hetsika am-pilaminana ihany koa.
Nilahatra teny an-dalamben'i Bishoftu sy teny amin'ny toerana manodidina ny Farihin'i Hora ny olona an'arivony izay miandry ny fametrahana ahi-maitso sy voninkazo teo amoron'ny farihy, fomba fanao Irreecha izay manamarika ny fiandohan'ny vanim-potoana vaovao. Nandritra izany fotoana izany, tonga ny mpitandro filaminana maro be nanao akanjo fandravana rotaka sy nanao saron-tava fiarovana amin'ny etona, nitondra basy lava sy fitaovam-piadiana miaraka amin'ny fiaran'ny tafika. Nihiaka ireo mpandray anjara sasany rehefa nanatona ny faritra izy ireo, sady nanao famantarana tamin'ny tànana manao X – famantarana ampiasain'ny vahoaka Oromo rehefa manao hetsi-panoherana manohitra ny heri-pamoretana avy amin'ny governemanta Ethiopiana.
Tao an-toerana, rehefa niezaka handray fitenenana teo anoloan'ny diabe Irreecha ny manampahefan'ny governemanta iray dia nanomboka nisongona azy ny mpanao fihetsiketsehana izay niteraka fisafotofotoana. Nisy lahatsary iray mampiseho mpanao hetsi-panoherana iray niakatra ny lampihazo ary nitarika ny vahoaka hikiakiaka hoe “miala, miala ny TPLF”. TPLF dia midika hoe Mandam-Panafahana ny Vahoaka Tigra, antoko lehibe indrindra ao anatin'ny fiarahan-dian'ny antoko ao amin'ny fitondrana ao Etiopia.
Avy eo, nanako manodidina ny faritra andian-tifitra. Mandritra izany fotoana izany, nihevaheva teo ambonin'ny vahoaka ny angidimby iray. Nipoaka ny korontana ary nandositra mba hitady fialofana ireo mpanao diabe. “Nanomboka niparitaka ny olona sady nikiakiaka sy nitabataba fa ‘nitifitra ry zareo ka nahatonga olona maro lavo tany amin'ny hantsana,” hoy ny olona iray sisa velona nitantara tamiko .
Nahoana no Irreecha?
Irreecha no fety malaza indrindra ao Oromia, ary fantatra noho ny fanantitranterany ny fomba fanaon'ny tompontany Oromos ara-kolontsaina sy ara-pivavahana izay foko tokana lehibe indrindra ao Ethiopia. Mifamatotra amin'ny politikan'ny maha Oromo ny fankalazana isaky ny roa taona amin'izany fomba izany .
Ankoatra izany, nandritra ny taona maro izao ireo Oromo mpikatroka mpanohitra no efa naneho mazava ny tsy fahafaliany tamin'ny rafitra ara-politika sy ara-toekarena Ethiopiana tao anatin'ny hetsika Irreecha. Nanambara ampahibemaso ny tsy fivadihany amin'ny antoko politika voarara Oromo toy ny Mandam-Panafahana Oromo ireo mpanatrika ny hetsika Irreecha tao Oromia na dia nandritra ny fotoanan'ny fitoniana ara-politika vao haingana aza. Nampimpongatra ny fahatsapana fanilikilihana sy fakana fananana tsy ara-drariny nandritra ny ampolo-taonany maro aza ny fanaovana fanambarana ara-politika tao amin'ny hetsika Irreecha .
Na izany aza, mavesatra noho ny fankalazana mahazatra ny Irreecha 2016 satria nanomboka tamin'ny fisaonana ireo izay maty nandritra ny 11 volana farany tamin'ny fihetsiketsehana izany. Raha tanisaina, olona 700 raha kely indrindra no namoy ny ainy tamin'ny hetsi-panoherana nitranga ny taona 2016. Nanomboka novambra 2015, saika hita isan'andro ireo tatitra fa misy olona iray voatifitra, voasambotra na niharan'ny herisetra avy amin'ny mpitandro ny filaminana .
Nanova ny Irreecha ho toerana iray hankalazana ny mari-panondroan'ny vahoaka Oromo sy mba hanehoana ny alahelony ihany koa tamin'ny alahady. Nampihozongozona an'i Ethiopia ny herisetra satria izany no fanafihana voalohany nataon'ny mpitandro ny filaminana ny fomba nentim-paharazana lehibe ara-kolontsaina sy ara-pivavahana an'ny vahoaka Oromo ary indrindra anisan'ny heri-pamoretana mahery vaika indrindra tsy mbola fahita hatramin'izay natao iadiana amin'ny mari-panondroana Oromo. Angamba natao mba hampitahorana ny hetsi-panoherana naharitra ao Oromia ny zava-nitranga ary nisy iray toy izany ihany koa tany amin'ny fanjakan'i Amhara, mba hilazana fa matanjaka ny governemanta Ethiopiana ka izay rehetra sahy mihaika azy dia hahita faisana.